Howlgal cusub oo laga billaabay Muqdisho iyo ujeedka. | Warbaahinta Ayaamaha
Howlgal cusub oo laga billaabay Muqdisho iyo ujeedka.
Booliska Soomaaliya ayaa fulinaya Amarkii kasoo baxay Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliyeed ee la xiriiray amniga waxaa ay howlgal ka sameeyeen meelo kamid ah Magaalada amuqdisho.
Ciidamada Booliska qeybta Waliyow Caddde iyo kuwa Jakboontiyada guur guura ayaa howlgalka sigaar ah waxaa ay uga fuliyeen degmooyinka Howlwadaag, Hodan iyo Waaberi, waxaana uu ahaa mid amniga lagu xaqiininayay, sidoo kale lagula dagaalamayay waxyaabaha maanka dooriya.
Intii uu howlgalka socday ayaa waxaa uu saameyn ku yeeshay isku socodka dadka iyo Gaadiidka ee waddooyinka Maka Al-Mukarama,.Wadnaha iyo 30-ka, halkaas oo howlgalka xoogiisa ay Ciidamadu ka fuliyeen